Naas, tanàna tsena mimanda taloha, no tanànan'i Kildare. Ny faritra dia manankarena amin'ny kolontsaina soavaly miaraka amin'ny hazakazaka roa - Punchestown, fonenan'ny hazakazaka mitsambikina irlandey sy Naas, izay manao hazakazaka fisaka sy fihazana; Goffs Bloodstock Sales sy toeram-piompiana stud maro.
Ankafizo ny fitsangantsanganana miala voly manamorona ny Grand Canal miaraka amin'ny fitsangatsanganana miainga avy any Sallins, mankafy ny tsiron'ireo trano fisakafoanana sy gastro-pub maro manerana ny faritra na ho an'ireo mpankafy môtô, zahao izay rehetra atolotr'i Mondello.
Hiaina ny tena fototry ny fiainana any Irlandey ary manontany tena amin'ny majikan'ny alika mpihetsiketsika mahafinaritra amin'ny hetsika.